OGAYSIIS: Shir Wayne Beesha Reer Amaadin oo ka Dhacaya Magaalada London – Rasaasa News
Jan 16, 2011 ethiopia, Ogaden, OGAYSIIS: Shir Wayne Beesha Reer Amaadin oo ka Dhacaya Magaalada London, ONLF
London, Jan 15, 2011 – Waxaa La ogeysinayaa dhamaan xubnaha ku abtirsada beesha reer Amaadin ee ku dhaqan dalka Ingriiska [UK] in ay ka soo qayb galaan shir weyn oo mudo la abaabulayay, ahna kii ugu horeeyay oo ay beeshu ku yeelanayso magaalada London taariikhdu marka ay tahay 22/01/2011 (Sabtida).
Shirkan oo ajandahiisu yahay wadatashi ku saabsan kaalinta beesha kaga aadan arimaha horumarka ee dhulka hooyo, gaar ahaana dagaanka beeshu ku abtirsato iyo waliba arimo kale oo beesha si gooni ah u khuseeya oo ay ka mid yahiin isku xidhka beesha. Shirkan ayaa lagu wadaa in ay ka soo qayb galaan indheer garad, culima,udiin, ugaasyo, haween iyo dhalinyaro u dhalatay beesha.
Shirkan oo mudo la abaabulayay ayaa la rajaynayaa in ay ka soo baxaan go,amo wax ku ool ah oo la taaban karo ilaahay idamkii. Shirku waxuu bilaabmayaa 2pm wuxuuna Dhamanayaa 4pm. Goobta uu shirku ka dhacayo Gadaal baanu ka soo sheegaynaa.
Cabdullaahi Xeef (Isku xirka) 4407577967761
Cabdiraxman Siraaje (Qoorgaab) (Abaabulka)
Ugaas Xassan (Talo bixin)
Cumar Ilkur (Xiriiriyaha shirka) 447506418887
Axmed Wayrax (Shir gudoomiye)